Expert Advice avy amin'ny Semalt amin'ny fomba hiarovana WordPress Website avy amin'ny olon-dratsy Cyber
Matetika antsoina hoe "hardening" ny fiarovana WordPress. Na dia tsy fantatrao aza ny fomba hanatsarana azyny fifamoivoizan'ny tranonkala, zava-dehibe ny hahazoana antoka ny fahazoan-dàlan'ny tranonkalanao. Tsy mety ny milaza fa an-tapitrisany amin'ny tranokala an'arivony tapitrisadia ampiasain'ny Blogger na WordPress.
Nik Chaykovskiy, The Semalt Senior Manager Success Manager, dia miteny fa WordPress no interface sy be mpampiasa indrindra. Ity rafitra fitantanana votoaty ity dia be dia beny tombontsoa sy ny tsy fahampiana. Ohatra, raha tsy mitandrina ny tenimiafinao ianao dia mety ho very ny fanomezan-dalanao sy ny fidirana amin'ny tranokalanao - altarweihe laufenn.Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hiarovana ny tranonkalanao WordPress amin'ny hackers.
Mamerina ny tranokalanao matetika
Ny faharetan'ny WordPress backups dia iray amin'ireo lohahevitra miresaka indrindra amin'izao fotoana izao.Zava-dehibe ny hametrahana ny tranokalanao WordPress tsara. Tokony hataonao indray mandeha na indroa isan-kerinandro mba hitazonana sy hiarovana azy amin'ny aterineto.Ny famerenana isan'andro dia, na izany aza, dia tena ankasitrahana satria miaro ny tranokalanao amin'ny mety hisian'ny fanafihana sy ny fanafihana malware. Be dia beWordPress plugins izay mety hanampy anao amin'ny aoriana, fa ny BackupBuddy dia iray amin'ireo tsara indrindra. Tsy ho mihoatra ny $ 100 izany ary mety hamerina anao indraybilaogy hacked na tranonkala amin'ny segondra vitsy monja. Vonona! Ny backup dia plugin idealy ho an'ireo izay mitady WordPress maimaim-poana.Izany dia ahafahanao manamboatra backup automatique, mandefasa ny rakitrao ho an'ny Dropbox, ary mamerina amin'ny laoniny ny data..Ny safidy fahatelo dia ny UpdraftPlus.Izy io dia plugin ho an'ny backup interactivement sy mpampiasa.
Fikirakirana ny fidirana an-tsokosoko
Indraindray, ireo hackers dia manandrana mandika ny tranokalan-tserasera WordPress amin'ny alalan'ny famaritana ny anaony tenimiafina. Izany no antony tokony hametrahanao ny fanandraman'ny fidirana amin'ny fidirana amin'ny aterineto. Amin'ny alàlan'ny default, WordPress dia mamela anao hampiasa tenimiafina samihafa,izay mikendry ny hitazona ny mombamomba anao ho azo antoka sy azo antoka. Tokony hanisy fiarovana fanampiny amin'ny tranokalanao ianao amin'ny alàlan'ny famerana ny fidirana amin'ny roaintelo. Raha sendra misy olona manandrana mampiditra ny tenimiafina diso, ny tranokalanao dia hihidy, fa ny tahirin-tsainy dia ho voaro. Misy nybe dia be ny WordPress plugins, toy ny Limit Login Fiezahana. Izany dia mamela anao hametra ny isan'ny fanandramana fidirana tsy fidiny. Ampiasao ity plugin ity, ianaodia afaka manakana IP maro ihany koa, fa zava-dehibe ny hahatsiarovanao ny tenimiafinao manokana. Ary raha mampiasa mpisolo samihafa ireo hackers, dia ity plugin ityManakana azy ireo tsy hitandrina ny tranokalanao. Ny safidy rehetra dia azo ekena ary mora ampiasaina. Azonao atao ny manakana IP tsy maharitramaharitra.
Aza mampiasa "admin" amin'ny anaranao
Ny iray amin'ireo fahadisoana goavana ataon'ny olona dia ny fampiasany "admin" ho anaran'ny mpampiasa azy.Tsy tokony hanao izany ianao raha te-hitazona ny tranokalanao WordPress azo antoka sy azo antoka. Ny bottines automatique matetika dia miditra amin'ny tranonkala mampiasa ity teny ity ary metytsarovy ny tenimiafina tsy misy fotoana. Misy ny fahafaha-manazongozonan'ireo hackers ny fampahalalana miafina, fampahalalam-baovao, ary zavatra hafa mampiasa izanysolonanarana. Raha tianao ny hitazona ny tranokalanao, dia zava-dehibe ny tsy ampiasanao "admin" ho toy ny mpampiasa anao voalohany. Fa tokony hanao izany ianaomisafidy anarana sy tenimiafina, izay tsy azo tsinontsinoavin'ny olona.